Laacibiinta Ugu Waa Weyn Kubada Cagta & Kooxaha Ay Taageeri Jireen Yaraantoodii - Raheem Sterling (Man United), Neymar (Real Madrid) | Laacib.net
Laacibiinta Ugu Waa Weyn Kubada Cagta & Kooxaha Ay Taageeri Jireen Yaraantoodii – Raheem Sterling (Man United), Neymar (Real Madrid)
February 10, 2020 Balaleti Comments Off on Laacibiinta Ugu Waa Weyn Kubada Cagta & Kooxaha Ay Taageeri Jireen Yaraantoodii – Raheem Sterling (Man United), Neymar (Real Madrid)
Xiddigaha aan ugu jecel nahay kubada cagta ka hor inta aysan noqonin xiddigo waa weyn oo xitaa aysan ku riyoonin inay heerka gaarayaan waxay ahaayeen taageerayaal sideena oo kale ah.
Waxaan maanta eegi doonaa xiddigaha ugu waa weyn kubada cagta iyo kooxaha ay taageeri jireen yaraantoodii.
Inkastoo uu u soo ciyaaray kooxda reer Brazil ee Santos iyo kooxda Barcelona, haatana uu joogo Paris Saint-Germain, Neymar ayaa qirtay inuu taageero u ahaan jiray kooxda Real Madrid.
Wareysi uu siiyay jariirada Marca sannadkii 2008 ayuu arintaan ku xaqiijiyay xiddiga reer Brazil iyadoo Los Blancos ay weli ku riyooneyso inay hesho xiddigaan.
Wuxuu qeyb ka ahaa wareysiga Neymar ee jariirada Marca, markii isna la weydiiyay kooxda uu taageeri jiray yaraantiisii waxa uu ku jawaabay:
“Kooxdeyda waa Real Madrid, waa kooxda ugu fiican dunida.”
Xiddiga reer Portugal markii uu yaraa waxa uu taageero u ahaa labo kooxood, mid ka dhisan jasiirada uu ka soo jeedo Madiera iyo kooxda weyn ee Portugal ee Benfica.
Hooyadiis ayaa wareysi ku xaqiijisay in Ronaldo uu markii hore taageeri jiray Benfica madaama ay aheyd koox uu aabihiis taageeri jiray laakiin markii uu ku biiray Sporting uu taageero u noqday iyaga.
Weeraryahanka Liverpool Sadio Mane ayaa ah taageero weyn oo kooxda Faransiiska ee Marseille. Wareysi uu sannadkii 2018 siiyay warbaahinta Faransiiska ee Telefoot ayuu Mane ku yiri:
“Markii aan yaraa waxaa si aad ah u daawan jiray horyaalka Faransiiska. Marseille ayaa ahayd koox aan mar walba taageeri jiray. Ilaa iyo maanta waan daawadaa kulamada Marseille.”
Weeraryahanka Faransiiska waxa uu taageero u ahaa markii hore kooxda Marseille ka dib waxa uu taageero u noqday Lyon. Wareysi uu RMC siiyay sannadkii 2014 ayuu ku yiri:
“Markii aan yaraa waxaan taageero u ahaa Marseille, waxaan xitaa aaday garoonka Velodrome. Markii uu Sonny Anderson tagay Lyon waan isbedelay.”
Weeraryahanka Manchester City Sergio Aguero ayaa 2006dii qirtay inuu taageero u yahay Liverpool. Isagoo u hadlayay Munich TZ waxa uu yiri:
“Inta aan xusuusto nolosheyda waxaan taageero u ahaa Liverpool, waana riyadeyda inaan mar uun u dheelo. Waxaan daawaday finalkii Champions League ee 2005, waxaana u dabaaldeg gool walba sida inay dhalisay kooxdeyda Independente oo kale.”
Xiddiga reer Sweden isagoo u waramayay sannadkii 2007 Sky Sports waxa uu sheegay in markii uu yaraa uu wadan walba koox ka taageeri jiray. Wuxuu sheegay inuu Italy ka taageerayay Inter Milan halka uu Ingariiska ka taageeri jiray Arsenal.
Xiddiga Man City waxa uu ahaan jiray taageero Liverpool. Wareysi uu siiyay majalada Match of the Day sannadkii hore ee 2019 ayuu De Bruyne ku yiri:
“Waxaan aad u jeclaa Michael Owen sababtoo ah sidiisa oo kale ay jir yaraa una orod badnaa. Waqtigaas isaga ayaan iska dhigi jiray.”
Xiddiga Man City ayaa taageero u ahaa kooxda ay sida weyn u xafiiltamaan ee Manchester United.
Sannadkii hore waxa uu u sheegay Daily Mirror: “Ma aheyn inaan sheego arintaan waqti xaadirkaan laakiin markii aan yaraa waxaa taageero weyn u ahaa Manchester United. Waxaan heystay maaliyad hore oo Man United ah.”
Gareth Bale oo Tottenham u soo dheelay ayaa qirtay inuu taageero u ahaa jiray kooxda ay xafiiltamaan ee Arsenal.
“Wax badan ayaan daawan jiray Arsenal gaar ahaan Bergkamp iyo Thierry Henry. Taageerayaasha Spurs kuma farxi doonaan warkaan.” ayuu BT Sport u sheegay sannadkii la soo dhaafay.
Halyeeyga Chelsea waxa uu taageero u ahaa markii uu yaraa Arsenal.
Waxa uu sannadkii 2009 u sheegay shabakada Chelsea: “Waan jeclahay inaan ka horimaado Arsenal sababtoo ah waxay ahaayeen kooxda France si weyn looga daawanayay madaama ay ciyaartoy badan oo Faransiis ah ay joogeen anigana waan taageerayay. Laakiin madaama ay Chelsea joogo waxaan shaqada u qabtaa kooxdeyda.”
Ka hor inta uusan noqonin halyeeyga Real Madrid waxa uu taageeri jiray kooxda ay cadowga yihiin ee Atletico Madrid. Qoyskiisa oo dhan ayaa taageerayay Atletico laakiin taasi waxay isbedeshay markii uu ku biiray akadeemiga Los Blancos.